Isku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka dhacay magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaIsku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland oo ka dhacay magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag
August 20, 2019 Puntland Mirror Somalia 0
Garooowe-(Puntland Mirror) Isku dhac u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo Somaliland ayaa maanta oo Talaado ah ka dhacay magaalada Hadaaftimo ee gobolka Sanaag, sida ilo-wareedyo deegaanka ku sugan ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Isku dhaca ayaa yimid kadib markii ciidamada Puntland ay u diideen in uu magaalada soo galo nin la sheegay in Somaliland ay u soo magacowday gobolka.
Ugu yaraan labo qof ayaa ku dhimatay isku dhaca, sida ilo-wareedyadu ay intaas ku dareen.
Sawiro la soo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya gaariga uu watay guddoomiyaha ka socday Somaliland oo waxyeelo soo gaartay kadib markii rasaas ay kaga dhacday taayirada.
Labada dhinac weli kama aysan hadlin isku dhaca maanta ciidamadooda ku dhexmaray gobolka Sanaag.
Sanadkan gudihiisa, Puntland iyo Somaliland ayaa dhowr jeer isku dhac ku dhexmaray deegaano kuyaala gobolka Sanaag.
Wasiirka maaliyada Soomaaliya oo sheegay in kharashka daabacaada uu hortaaganyahay lacagta cusub ee dalka